Uwubukela njani umsitho we-Apple ngo-Epreli 20 kwi-Intanethi | Ndisuka mac
Sikufutshane kakhulu ekuqaleni kwenkcazo yokuqala ye-Apple kulo nyaka ka-2021. Kule meko inkampani yaseCupertino ngokuqinisekileyo iya kusungula imodeli ezintsha ze-iPad okanye ze-iPad, mhlawumbi inebhulethi yokugqibela yokumilisela ii-AirTags kunye Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo bekukho amarhe okuba banokuphinda baqalise iMac ehlaziyiweyo nenemibala.
Ewe abasebenzisi beApple sele befuna ukubona ifayile ye- ntetho yokuqala yonyaka kwaye kulo nyaka awuzange ubanjwe ngo-Matshi njengesiqhelo, inkampani yalinda okanye kwafuneka ilinde kude kube ngu-Epreli ukuze yenze i-Keynote yayo.
Njengoko sisazi sonke ukuba le ntetho iya kwenziwa Ukusasaza ividiyo kwiApple Park, ke akuyi kubakho bantu okanye imithombo yeendaba ekhethekileyo eCupertino. Kodwa masiye kwinto esiza kuyenza, ukubona umboniso, konke ekufuneka sikwenzile kukuba:
Ngqo ukufikelela kwiwebhusayithi Apple nakwesiphi na isixhobo
Ukusuka kweyakho Umjelo weYouTube
Unokuwulandela umsitho ngokugubungela esiya kuthi sikwenze kwi-sydemac.com kunye noogxa bethu ukusuka actualityiphone.com
Izinketho zokwenza umcimbi uphile zininzi kwaye ukhumbule oko eSpain iza kuqala malunga nentsimbi yesi-19.00: XNUMX ebusuku., ngaphantsi kweyure kwiiCanary Islands. Ewe kunjalo, kuninzi ukulindela ukubona into esiveliswa yi-Apple kwaye yile yokuba ineemveliso ezininzi ezinokumiliselwa okanye ezinokuthi zihlaziywe ixesha elide, ezinje ngeApple TV okanye ababizwa ngokuba zii-AirTags ezingaziwa ukuba ziphi ngokusemthethweni ...
Ndijonge phambili kwigama eliphambili!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Uwubukela njani umsitho we-Apple ngo-Epreli 20 kwi-Intanethi